China Hot gbazee nrapado nkiri maka insole emepụta na suppliers | H&H
Hot gbazee nrapado film maka insole
Na ma ọ bụ na-enweghị akwụkwọ na-enweghị
Ọkpụrụkpụ / mm 0.015 / 0.02 / 0.025 / 0.035 / 0.04 / 0.06 / 0.08 / 0.1
Obosara / m / 1.2m-1.52m dị ka ahaziri
Mpempe Agbaze 40-60 ℃
Ọrụ nka igwe akpo oku oku: 100-140 ℃ 5-12s 0.4mpa
Ọ bụ a TPU na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film nke adabara bonding nke ịkwanyere, keakamere akpụkpọ anụ, ákwà, eriri na ihe ndị ọzọ na-achọ ala okpomọkụ. Nọmalị ọ na-eji na-Nlụpụta Pu ụfụfụ insole nke bụ gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na-abụghị na-egbu egbu.
Tụnyere mmiri mmiri mama bonding, ngwaahịa a na-akpa àgwà ọma na ọtụtụ akụkụ dị ka mmekọrịta gburugburu ebe obibi, ngwa usoro na isi na-eri ịzọpụta. Naanị okpomọkụ-pịa nhazi, nwere ike lamination-emezu.
Anyị nwere ike iji ngwaahịa ma ọ bụ na-enweghị mkpụrụ mee ngwaahịa a, dịka mkpa ndị ahịa si dị. Oge ụfọdụ, a na-eji igwe na-eji igwe eji agba igwe iji kpoo nkwado akwa. Imirikiti ndị ahịa anaghị eji mkpụrụ osisi, ma ọ bụ ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ihe nkiri na ihe ntanetị pee mgbe ha na-eji igwe eji akwa akwa. Anyị nwekwara ike ịnye nke a. Ihe nkiri emere nke TPU dị nro ma nwee ike ịsacha, nke gosipụtara ihe mere ngwaahịa a ji ewu ewu. Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu ihe nlereanya a bụ mpịakọta 500m, obosara oge niile bụ 152cm ma ọ bụ 144cm, a pụkwara ịhazi obosara ndị ọzọ.
1. Mmetụta aka dị nro: mgbe etinyere ya na insole, ngwaahịa ahụ ga-enwe uwe dị nro na nke dị nro.
2. Na-eguzogide mmiri na-asa: Ọ nwere ike iguzogide opekata mpe ugboro 10 ịsa mmiri.
5. Low agbaze mgbe: ọ suut lamination ikpe dị ka ákwà na ala okpomọkụ na-eguzogide.
Pu ụfụfụ insole
Hot gbazee nrapado film ọtụtụ-eji na insole lamination nke na-ewu ewu nabatara ahịa n'ihi na nke dị nro na ala yi mmetụta. E wezụga nke a, Dochie ọdịnala nke na-arapara n'ahụ, ihe nkiri na-agbaze agbaze ọkụ aghọwo ọrụ bụ isi nke etinyerela ọtụtụ puku ndị na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ maka ọtụtụ afọ.
L341B ọkụ gbazee nrapado film nwekwara ike-eji na ụgbọ ala ute, akpa na akpa, ákwà lamination.As bụrụ na ọ bụ banyere bonding nke Pu ụfụfụ ngwaahịa, anyị nwere metụtara ngwọta. Karịsịa na bonding nke foamed osisi ngwaahịa, anyị ụlọ ọrụ si ngwa ngwọta na mpaghara ebe a abụwo ndị tozuru okè. N'ihi ya, anya, anyị ruru stratejik imekọ ihe ọnụ na ihe karịrị 20 ibu ụlọ ọrụ n'ụlọ na mba ọzọ, na ngwa nke na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film na ubi nke ibu na akpa compounding enwetawo ezigbo mma Ibọrọ.
Nke gara aga: Orylọ ọrụ maka ihe mkpuchi nke ihe mkpuchi - CPE ihe nkiri maka CPE apron - HH
Osote: TPU na-ekpo ọkụ gbazee mpempe akwụkwọ maka insole
Elestric Tpu Hot gbazee Nkiri
Eva Hot gbazee Nkiri
Eva Hot gbazee Web Nkiri
Pa gbazee Ihe Nkiri
Pa Hot gbazee gluu mpempe akwụkwọ
Pa Hot gbazee Web Nkiri
Ihe nkiri Agbaze Hot Hot
Tpu Hot gbazee gluu mpempe akwụkwọ
PEVA onuete akara teepu maka disposable protectiv ...